युवाहरु महान् सांस्कृतिक क्रान्तिका महान् सेनानी हुन् - क. माओत्सेतुङ
अध्यक्ष माओले २१ जुलाई १९६६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दिनुभएको भाषणको पूर्ण पाठ ।
क. माओत्सेतुङ २०७६ वैशाख ४ गते बुधवार
अध्यक्ष माओले मेइ युआन जूको ‘मे पच्चीस’ नामक ठूलो पोस्टरलाई बीसौँ शताब्दीको साठीको दशकको चिनियाँ पेरिस कम्युन घोषणापत्र भन्नुभएको छ । त्यसको पेरिस कम्युन भन्दा ठूलो महत्त्व राख्छ । यस्ता पोस्टरहरु लेख्न गाह्रो छ । युवक सङ्घका धेरै कार्यकर्ताहरुले आफ्ना पिताहरुका बारेमा यस्ता पोेस्टरहरु लेखेका छन् । त्यसमा उनीहरुले के कुरा उल्लेख गरेका छन् भने उनीहरुका पिताहरुले आफ्नो विगत भुले , उनीहरुसँग माओविचारधाराका बारेमा कुराकानी गरेनन् । बरु स्कुलमा कति नम्बर ल्यायौ भनेर मात्र चासो राखे र राम्रो नम्बर ल्याएकोमा पुरस्कार दिए । अध्यक्ष माओले कमरेड चेन पोतालाई ‘तपाईहरुले बनाउनुभएको ठूला पोस्टरहरु साह्रै राम्ररी लेखिएका छन्’ भन्ने सन्देश युवा सङ्‌घका साथीहरुसम्म पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्नुभयो र त्यसपछि बोल्न थाल्नुभयो ।
म तपाईहरु सबैलाई भन्छुः युवाहरु महान् सांस्कृतिक क्रान्तिका महान् सेनानीहरु हुन् । उनीहरुलाई पूर्ण रुपमा परिचालित गर्नुपर्छ ।
पेकिङ आइपुगेपछि म निकै बेखुसी र उदास भएँ । केही कलेजका ढोकाहरु बन्द गरिएका थिए । यहाँसम्म कि केहीले विधार्थी आन्दोलन दबाएका थिए । विधार्थी आन्दोलन दबाउनेहरु को थिए ? ती हुन् पेइयाङ भन्ने युद्धसरदार । विधार्थी आन्दोलनलाई यसरी थर्कमान गर्न खोज्नु गैरमार्क्सवादी चाला हो । केही मान्छेहरु दिनहुँजसो जननीतिका बारेमा कुरा गर्छन् तर काम गर्ने बेलामा बुर्जुवा नीति पछ्याउँछन् । युवक सङ्घको केन्द्रीय समिति विद्यार्थी आन्दोलनको पक्षमा उभिन पुगेको छ । को को महान् सांस्कृतिक क्रान्तिको विपक्षमा छन् ? अमेरिकी साम्राज्यवाद, सोभियत संशोधनवादीहरु , जापानी संशोधनवादीहरु र प्रतिक्रियावादीहरु ।
‘आफ्ना’ र ‘पराइ’ भनेर पक्षपात गर्नेहरुलाई छुट्कारा दिनु भनेको क्रान्तिलाई रोक्न खोज्नु हो । टाँसिएका ती ठूला पोस्टरहरुलाई छोप्नु हो । यस्ता कुरा गर्न कसैलाई छुट छैन । यो आधारभूत रुपमै गलत छ । उनीहरुले तुरुन्त आफ्नो दिशा बदल्नुपर्छ र थोत्रा विचारहरु धुलोपिठो पार्नुपर्छ ।
हामी जनतालाई विश्वास गछौं । जनताको गुरु बन्नु छ भने हामीले जनताको विद्यार्थी बन्न तयार हुनुपर्छ । अहिले चालु रहेको महान् सांस्कृतिक क्रान्ति आकाश धर्ती थर्काउने घटना हो । के हामी समाजवादसम्म पुग्न सक्छौं ? के हामीमा त्यो हिम्मत छ ? त्यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी वर्गलाई निर्णायक रुपमा सखाप पार्न सक्छौं र तीन खालका ठूला अन्तरहरु घटाउन सक्छौं ।
‘अधिनायकवादी’ बुर्जुवा विचार सखाप पार्नुछ । त्यसलाई सखाप नपारेसम्म न त समाजवाद स्थापना गर्न, न त पहिलो सङ्घर्ष छिचोल्न सक्छौं । दोस्रो कुरा हो, आलोचना र तेस्रो हो, रुपान्तरण । कार्यालयमा बस्दै रिपोर्टहरु सुन्नु राम्रो कुरा होइन । जनतामा भर पर्नु, उनीहरुलाई विश्वासमा लिनु र यो सङ्घर्षलाई किनारा लगाउनुको कुनै विकल्प छैन । फेरि क्रान्ति हाम्रै विरुद्ध खनिन सक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि तम्तयार भएर बस्नुपर्छ । सिङ्गो पार्टी, सरकारमा नेतृत्व गरिरहेकाहरु र पार्टीका जिम्मेवार कमरेडहरु त्यसका लागि तम्तयार भएर बस्नुपर्छ । क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो भने कुक्रुक्क खुम्चिने होइन, तपाईंहरुले आफैलाई अनुशासित बनाउनुपर्छ, आफैलाई फेर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने तपाईहरुले आफूलाई दलदलबाट निकाल्न सक्नुहुन्न ।
यहाँ त्यस्ता थुप्रै कमरेडहरु हुनुहुन्छ , जो अरुको विरुद्ध त चर्कोसँग लडिरहनु भएको छ तर आफैसँग भने त्यसरी लड्न सकिरहनु भएको छैन । यही ताल हो भने उहाँहरुले समाजवादमा प्रवेश गर्न वैतरणी नदी तर्न सक्नुहुने छैन ।
यहाँसम्म कि तपाईंहरुले आफ्नै जिउमा आगो लगाउन तयार हुनुपर्छ, दनदन बलिरहेको आगोको ज्वालामा आफूलाई होम्न तयार हुनुपर्छ । तपाईंहरुमा यसो गर्न हिम्मत छ ? किनकि त्यसले त तपाईंको दिमाग खानेछ ।
(बीचैमा एकजना कमरेडले भन्नुभयो: हो, हामी तयार छौँ । त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनेछौँ । हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर बाँच्न तयार छौँ र कम्युनिस्ट पार्टीकै सदस्य भएर मर्न तयार छौँ । आरामदायी सोफा र विद्युुतीय पङ्खाको हावा खाएर बस्ने हाम्रो कुनै सोख छैन । त्यसपछि अध्यक्ष माओले फेरि बोल्न थाल्नुभयो ।)
जनतासँग हामीले त्यस्ता कठोर बारहरु राख्नु हुँदैन । तर जब पेकिङ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु चलमलाउन खोजे तब उनीहरुलाई यस्तै बार बनाएर छेक्न खोजियो । उनीहरुले त्यसलाई नरम भाषामा ‘दक्षिणपन्थतर्फको यात्रा’ भने । वास्तवमा त्यो दक्षिणपन्थतर्फ यात्रा नभएर गलत पथतिरको यात्रा थियो ।
त्यस्ता केही विद्यालयहरु पनि छन् जसले विद्यार्थीहरुलाई प्रतिक्रान्तिकारीको बिल्ला भिराइदिएका छन् ।
(लिआइसन – प्रमुख चाङ येनले त्यहीँ २९ जनालाई प्रतिक्रान्तिकारी भएको घोषणा गरिदिए । त्यसपछि अध्यक्ष माओ पुनः बोल्न थाल्नुभयो ।)
यसरी तपाईंहरु जनतालाई अर्को किनारामा धकेल्नुहुन्छ । खराबै भए पनि त्यस्ता जनतालाई तर्साइहाल्नु हुँदैन । कति नै होलान् र त्यस्ता मान्छे ? अत्याधिक बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरु त राम्रा छन् ।
(कसैले बीचैमा प्रश्न सोध्यो–त्यस्ताहरुलाई कानुनी कारवाही गर्न के गर्ने त ? त्यसपछि अध्यक्ष माओले भन्नुभयो)
किन डराउनुहुन्छ ? जब खराब मान्छेहरु आउनेछन् तब उनीहरुलाई तपाईं अँठ्याउन सकिहाल्नुहुन्छ । तपाईंहरु असल मान्छेहरुसँग डराउन के जरुरी छ र ? तपाईंहरुले ‘डर’ भन्ने शब्दलाई ‘साहस’ शब्दले सट्टापट्टा गर्नु प¥यो । तपाईंहरुले एकचोटी मात्रै होइन, बारम्बार देशलाई समाजवादमा प्रवेश गराउन बल गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई कमान्डमा राख्नुहोस् , जनताका बीचमा जानुहोस् , उनीहरुसँग घुलमिल गर्नुहोस् र महान् सांस्कृतिक क्रान्तिलाई अझ राम्ररी हाँक्नुहोस् ।
(खोजी प्रकाशनद्धारा प्रकाशित ‘माओका दुर्लभ रचनाहरु’बाट )
पछिल्लाे - प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाल सरकारको प्रतिवेदन प्रस्तुत
अघिल्लाे - काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय किसान संघर्ष दिवस मनाइयो